सूचना-प्रबिधि | Sagarmatha TV
सामाजिक सञ्चाल चलाउँदै सरकार
राज्यका सबै निकायले सामाजिक सञ्जालहरु भाईवर, फेसबुक, र ट्वीटर अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारी निकायले सामाजिक सञ्चाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जनगुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न र जनतासँग सरकारी नियको सम्बन्ध मजबुत बनाउन भन्दै यस्तो कार्यविधि ल्याइएको हो । सरकारले आफ्नो […]
एनसेलको नयाँ अफर ५ रुपैयामा २५ एमबि डेटा भोलुम लिन सकिने
काठमाडौं । एनसेलले ५ रुपैयामा २५ एमबि डेटा भोलुम लिन सकिने गरी आईतवार देखि ‘फुच्चे प्याक’ ल्याएको छ । यस डेटा प्याक अन्तर्गतको २५ एमबि डेटा ग्राहकले एनसेलको कुनै पनि नेटर्वक टुजि, थ्रिजि तथा फोरजिमा बिहान ५ देखि बेलुका ५ बजे सम्म प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सेवा लिन ग्राहकले आफ्नो म्यासेज बक्समा अंगे्रजी अंक पाँच […]
सामसङकाे नफुट्ने लचिलो डिस्प्ले चाँडै बजारमा
काठमाडाैं । सामसङ आफ्नो सुपर एमोलेड डिस्प्लेका लागि चर्चित छ । अब सामसङले योभन्दा एक कदम अगाडि बन्ने योजना बुनिरहेको देखिएको छ । वास्तवमा, यसको नफुट्ने लचिलो स्क्रिन प्यानले हरियो झण्डा पाएको छ । सामसङ न्यूजरुम वेबसाइटलाई मान्ने हो भने नयाँ लचिलो OLED प्यानल अन्डरराइटर्स ल्याबोरेटरिजमार्फत सर्टिफाई गरिएको हो । टेस्टिङ कम्पनी OSHA (the Occupational […]
उड्ने कार निर्माणको सपना मानिसले धेरै अघिदेखि गरेका हुन् । धेरै उपन्यास र फिल्ममा यसबारे कथ बुनिएका छन् । अवब भने मानिसले देखेको उड्ने कारको सपना साकार हुँदै छ । धेरै कम्पनीले उड्ने कारको विकासमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । तीमध्ये केही कम्पनी भने परीक्षणको चरणमा छन् । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा नयाँ खाले उड्ने कार सार्वजनिक गरिएको […]
जहाँ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि कर लाग्छ
एजेन्सी । के तपाईं सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा धेरै समय बिताउनु हुन्छ ? उसो भए तपाईं युगाण्डाका राष्ट्रपतिसँग सहमत हुनुहुन्छ होला, जसले युवाहरूले ‘स्क्रीने हेरेर समय खेर फालिरहेको ठान्छन्।’ त्यहाँको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा समय बिताउनेमाथि कर लगाएको छ ताकि ‘उत्पादकत्व बढोस्।’ तर के यो नीतिले काम गर्ला? बीबीसीबाट ।